Shirweyne Nabadeed oo Kasocda Cabduwaaq (dhegayso) – Radio Daljir
Shirweyne Nabadeed oo Kasocda Cabduwaaq (dhegayso)
Janaayo 2, 2018 9:22 b 0
Shir Wayne lagu heshiinayo beelaha Caabudwaaq isla markaana ay gar wadeen ka yihiin waxgaradka Deegaanka ayna Maal gelinayso Hay’ada hopel ayaa ka socda Magaalada Caabudwaaq.
Shirka waxaa ujeedkiisu yahay in looga gudbo dhacdooyinka Qabiil ee joogtada ka noqday magaaladaas.
Hadaba waxaa jira dad saluugsan Habka Hay’adda hopel ay u marayso qabashada shirkaan waxaana dadka saluugsan kamid ah Cali Cumar oo ah gudoomiyaha Urur nabadeed fadhiigiisuna yahay Caabudwaaq Iyo Cadaado.
Isagoo Caabudwaaq joogo ayuu Daljir uga Waramay shirka iyo waxa ay ku saluugeen.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee dooraashoyinka DFS oo Gaaray Jowhar (dhegayso)